प्रचण्डले पार्टीका सबैलाई लखेटे, बिचरा बाबुराम धोती र कूर्ता लगाएर हिड्दैछन् भन्नू हुन्छ : प्रधानमन्त्री।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिगतमा पार्टीका विभिन्न व्यक्तिलाई ल’खेटेको ल’खेटेकै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक गुरु मोहन वैद्यलाई पनि त्यसैगरी ल’खेटेर पार्टीको बा’स मिलाई दिएको आरोप लगाउनु भयो ।
शनिबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्ती ओली स’मुहको प्रदेश १ भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड जुन पार्टीमा गएपनि त्यहाँ भाँ’डभैलो हुनो गरेको बताउनु भयो ।अध्यक्ष प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भटट्राईलाई पनि प्रयोग गर्नुसम्म गरेर अन्त्यमा लखेटेकाे प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
उहाँले प्रचण्डलाई खास ठाउँमा डा. लेखिएको व्यक्ति चाहिएको र पछि डा. न सा भनेकाे आरोप लगाउनु भयो ।प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले डाक्टर मान्छेले धो’ती कुर्ता लगाएर हिडिरहेको भन्दै व्यंग्य गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रचण्डलाई त्यतिबेला डा. लेखिएको मान्छे चाहिएको रहेछ, डा.पनि खास ठाउँको,
खुब प्रयोग गरेपछि विचरा डा. न सा, अहिले त धाेती कू’र्ता लगाएर हिड्नुहुन्छ उहाँ।’ त्यस्तै प्रचण्डले विप्लवलाई भने जंगलतिर ल’खेटेको आरोप लगाउनु भयो । तर आफूभने प्रचण्डसँग न’हारेको प्रधानमन्त्री ओलीले जि’कीर गर्नुभयो ।
२०७७ माघ ३, शनिबार २१:१४ गते0Minutes 508 Views
मुगुलाई कोरिया सरकारले दियो आधुनिक अस्पतालको भवन !